Wararka - Codsiga Bamka Peristaltic ee Daaweynta Biyaha Qashinka
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo si isdaba joog ah loo horumarinayo warshadeynta iyo magaalaynta, dhaqaalaha bulshada ayaa si dhakhso leh u horumaray, laakiin dhibaatada ka dhalatay wasakheynta wasakhda ayaa noqotay arrin muhiim ah oo u baahan in si deg deg ah loo xaliyo. Daaweynta bulaacada ayaa si tartiib tartiib ah u noqotay lagama maarmaan horumarinta dhaqaalaha iyo ilaalinta ilaha biyaha. qayb. Sidaa darteed, si xoog leh loo horumariyo tiknoolajiyada daaweynta bullaacadaha iyo heerka warshadeynta ayaa ah hab muhiim ah oo looga hortago wasakheynta biyaha loona yareeyo biyo yaraanta. Daaweynta bullaacadaha waa habka lagu nadiifiyo bullaacadaha si loo buuxiyo shuruudaha tayada biyaha ee loogu talagalay in lagu shubo biyo gaar ah ama dib loo isticmaalo. Tiknoolajiyada daaweynta bullaacadaha casriga ah waxaa loo qaybiyaa daaweyn asaasi ah, mid sare iyo mid jaamacadeed iyadoo loo eegayo heerka daaweynta. Daaweynta aasaasiga ah badanaa waxay ka saartaa arrinta adag ee la joojiyay ee bullaacadaha. Hababka jireed ayaa badanaa la isticmaalaa. Daaweynta labaad waxay badanaa ka saartaa walxaha dabiiciga ah ee ku jira bullaacadaha. Guud ahaan, bulaacada soo gaadha daaweynta labaad waxay la kulmi kartaa heerka dheecaanka, iyo habka uumiga firfircoon ee firfircoon iyo habka daaweynta biofilm ayaa badanaa la isticmaalaa. Daaweynta jaamacadeed waa in laga sii saaro wasakhda gaarka ah ee gaarka ah, sida fosfooraska, nitrogen, iyo wasakhda dabiiciga ah ee ay adagtahay in la baabiyo, wasakhda aan caadiga ahayn, iyo cudurada keena.
Xulasho sax ah oo lagu kalsoonaan karo
Bambooyin Peristaltic ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa hababka daaweynta bullaacadaha sababo la xiriira astaamo u gaar ah. Qiyaasta badbaadada, saxda ah iyo waxtarka leh ee kiimikada iyo gaarsiinta ayaa ah ujeedooyinka hawlgal kasta oo lagu daweeyo bulaacada, taas oo u baahan bambooyin loogu talagalay in lagu maareeyo codsiyada ugu baahida badan.
Mashiinka hawo-mareenka ah wuxuu leeyahay awood is-gaarsiin xoog leh waxaana loo isticmaali karaa in lagu kiciyo heerka biyaha wasakhda si loo daaweeyo. Mashiinka peristaltic-ka wuxuu leeyahay xoog xiirid hooseeya mana baabi'in doono waxtarka flocculantka marka la daabacayo flocculants xasaasi u ah. Markuu bamka peristaltic wareejiyo dareeraha, dareeraha wuxuu ku qulqulaa tuubada kaliya. Marka la wareejinayo bullaacadaha ay ku jiraan dhoobada iyo ciidda, dareeraha la soo saaray ma la xiriiri doono mashiinka, kaliya tuubada matoorka ayaa la xiriiri doonta, sidaa darteed ma jiri doonaan wax isku dhex yaacaya, taas oo macnaheedu yahay Bamka ayaa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah muddo dheer, isla bamkaasna waxaa loo isticmaali karaa gudbinta dareeraha kala duwan adoo si fudud u badalaya tuubada bamka.
Mashiinka peristaltic wuxuu leeyahay saxnaanta gudbinta dareeraha sare, taas oo xaqiijin karta saxnaanta cabbirka dareeraha ee reagent-ka lagu daray, si tayada biyaha si hufan loola dhaqmo iyada oo aan lagu darin waxyaabo kiimiko ah oo aad u dhib badan. Intaa waxaa dheer, bambooyin peristaltic ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa gudbinta shaybaarrada la tijaabiyay iyo reagentyada gorfaynta ee ku saabsan ogaanshaha tayada biyaha iyo qalabka falanqaynta.
Maaddaama daaweynta biyaha wasakhda ah ee dawladeed iyo kuwa warshadaha ay noqdaan kuwo takhasus gaar ah leh oo qallafsan, qiyaasta saxda ah, bixinta kiimikada iyo howlaha wareejinta wax soo saarka ayaa muhiim ah.
Shirkad daaweynta biyaha ah ayaa u isticmaashay Beijing Huiyu dareeraha dareeraha peristaltic YT600J + YZ35 habka baaritaanka bullaacadaha ee baaritaanka bulaacada si loogu wareejiyo bullaacadaha ay ku jiraan dhoobada iyo ciidda haanta falcelinta biofilm si ay uga caawiso xaqiijinta waxtarka habka daaweynta bullaacadaha. suuragalnimada. Si si guul leh loogu dhammeeyo imtixaanka, macaamilku wuxuu soo bandhigayaa shuruudaha soo socda ee bamka durugsan:
1. Mashiinka peristaltic waxaa loo isticmaali karaa in lagu shubo wasakhda wasakhda leh dhoobo ka kooban 150mg / L iyada oo aan la saamayn nolosha adeegga bamka.
2. Baaxadda ballaadhan ee qulqulka bullaacadaha: uguyaraan 80L / hr, ugu badnaan 500L / saac, socodka ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha nidaamka dhabta ah.
3. Mashiinka peristaltic waxaa lagu shaqeyn karaa banaanka, 24 saac maalintii, hawlgal joogto ah muddo 6 bilood ah.
Waqtiga dhejinta: Feb-04-2021